မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကအနိုင်ရဖို့ထိုက်တန်ခဲ့ကြောင်းမော်ရင်ဟိုပြောကြား - FOX Sports Myanmar
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းနည်းပြ မော်ရင်ဟိုက ချယ်ဆီးအသင်းဟာ အက်ဖ်အေဖလား ဗိုလ်လုပွဲစဉ်မှာ အနိုင်ရရှိဖို့ မထိုက်တန်ခဲ့ကြောင်း ပွဲအပြီးမှာ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ဟာဇက်ရဲ့ တစ်လုံးတည်းသောပင်နယ်တီသွင်းဂိုးနဲ့အတူ ချယ်ဆီးအသင်းဟာ မန်ချက်စတာယူနိုက် တက် အသင်းကို အနိုင်ရရှိပြီး အက်ဖ်အေဖလား ရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါအနိုင်ရလဒ်နဲ့အတူ ကွန်တီဟာလည်း မော်ရင်ဟိုကို အင်္ဂလိပ် ပြည်တွင်းဖလားဗိုလ်လုပွဲမှာ အနိုင်ရရှိတဲ့ ပထမဆုံးနည်းပြ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
“ သူတို့အတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်။ဒါပေမယ့် သူတို့ ဒီချန်ပီယံဆုနဲ့ ထိုက်တန်တယ်လို့တော့မထင်ဘူး ဗျ။ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းနည်းပြအနေနဲ့ရော ကျွန်တော့်ရဲ့အသင်းဟောင်းဖြစ်နေလို့ ပါ သူတို့ကိုဂုဏ်ပြုပါတယ်။ ဒီနေ့သူတို့ က ကျွန်တော့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် အနိုင်ရဖို့ ထိုက်တန်တာ ကျွန်တော်တို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့က အကောင်းဆုံးအသင်းပါ။ ဒါပေမယ့် ဒါက ဘောလုံး အားကစားလေ။ ” လို့ မော်ရင်ဟိုက ပြောပါတယ။်
ဒါ့အပြင် အသင်းကစားသမားတွေရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုလည်း မော်ရင်ဟိုက ချီးကျူးပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
“ ရှုံးပွဲတိုင်းကတော့ နာကျင်စရာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ နောင်တရစရာ မရှိ အောင် အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင် နာကျင်မှုနည်းတာပေါ့ ။ ရှုံးရင်တောင် ဒီနေ့လိုအရှုံးမျိုးကို ပိုလိုလားပါတယ်။ ဥပမာ နယူးကာဆယ်အသင်းနဲ့လိုပွဲဆိုရင် မရှုံးသင့်ဘူး။ ကစားသမားတွေ အတွက် ပျော်ရွှင်ပါတယ်။ ဒါက တကယ်ကိုအရေးကြီးတာပါ။ ” လို့ မော်ရင်ဟိုကဆိုပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်တွေက ခြေကျင်းဝတ်ဒဏ်ရာကြောင့် မကစားနိုင်ခဲ့တဲ့ လူကာကူ ဟာ လူစားဝင်ကစား သမားအနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့ပေမယ့်လည်း ဂိုးသွင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ မော်ရင်ဟိုကတော့ လူကာကူဟာ ကြံ့ခိုင်မှု မပြည့်ဝတာကြောင့် ပွဲထွက်ကစားနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း ဆိုပါတယ်။
“ ပွဲထွက်လူစာရင်းမှာ မပါတာ ကျွန်တော့်ဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါ။ ကစားသမား တစ်ယောက်က သူကစားဖို့ အဆင်သင့်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောလာရင် ဘယ်နှမိနစ်ကစားနိုင်လဲ လို့သာ မေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခံစစ်(၉)ယောက်လောက်ပိတ်ထားတဲ့အသင်းကို လူကာကူ မပါဘဲ ကစားရတာ ခက်ခဲပါတယ်။ ချယ်ဆီးအသင်းက မနုံပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့မှာ ဖယ်လိုင်နီနဲ့ လူကာကူ မပါဘူးဆိုတာ ကို သူတို့ကောင်းကောင်းသိတယ်။ ရှုံးပွဲတိုင်းနာကျင်ရပေမယ့် ဒီတစ်ပွဲမှာတော့ ကျွန်တော် နောင်တမရ ဘဲ အိမ်ပြန်နိုင်ခဲ့တယ်။ ” လို့ မော်ရင်ဟိုကပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဖီးလ်ဂျုံးစ်ရဲ့ ဖျက်ထုတ်မှုကြောင့် ပင်နယ်တီခွင့်ပြုခဲ့ရပေမယ့်လည်း နောက်တန်းကစားပုံကို ကျေနပ်တယ်လို့ မော်ရင်ဟိုက ဆိုပါတယ်။
“ ကျွန်တော်တို့ဟာ ပြောင်မြောက်တဲ့ နောက်တန်းစွမ်းဆောင်ရည်တစ်ခုကို လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နေရာအလိုက် အကောင်းဆုံး ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့က ဂျီရော့က တောင်ပံကနေ ဖြတ်တင် ပေးမယ်။ ဟာဇက်က အဆုံးသတ်မယ်ဆိုပြီး ရည်ရွယ်ကစားခဲ့တာပါ။ အသင်းတစ်ခုကို ခန့်မှန်းပြီးကစားနိုင်တယ်ဆိုရင် ဒါဟာ လွယ်ပါတယ်။ ဒီလိုပွဲမျိုးမှာ ဘယ်သူမှ ဂိုးပေးချင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဟာဇက်ကတော့ အရမ်းကောင်းတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ပင်နယ်တီ ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်။ ” လို့ နည်းပြမော်ရင်ဟိုက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တွစ်တာပေါ်မှာတော့ ပရိသတ်တချို့က မော်ရင်ဟိုရဲ့မှတ်ချက်ကို ပြန်လည်လှောင်ပြောင်ထားကြပါတယ်။
Mourinho crying aboutateam parking the bus. Lovely stuff. Chin up son.
— Charles Watts (@charles_watts) May 19, 2018
Mourinho saying Chelsea parked the bus. I love this game
— El Che (@SegunEmdin) May 19, 2018
Jose "I have to be respectful, but I think that we deserve to win & we play the best football."
Then I’m sorry Mourinho but that’s really concerning if you believe that. #Mufc
— Totally Man Utd™ (@TotallyMUFC) May 19, 2018
And "disjointed" is the one thing you don't expectaMourinho team to be — particularly after two years. Still not clear what this Manchester United team is supposed to look like. It's very underwhelming after all the money they've spent
— Oliver Kay (@OliverKayTimes) May 19, 2018
Conte out Mourinho'd Mourinho and José had no answer to it. Awful match, dreadful tactics all round
— United Rant (@unitedrant) May 19, 2018
Home Football မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကအနိုင်ရဖို့ထိုက်တန်ခဲ့ကြောင်းမော်ရင်ဟိုပြောကြား